Cumar Dhagey oo looga digay inuu aqbalo dhaca kursiga besha CELI/MARREEXAN – Kismaayo24 News Agency
Cumar Dhagey oo looga digay inuu aqbalo dhaca kursiga besha CELI/MARREEXAN
by admin 1st December 2016 1st December 2016 8 86
Ugaaska Beesha Marreexaan Ahmed Barre Ali “Taakooy” ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay boobka ay isku raaceen Madaxweynaha Galmudug Abdikariim Guuleed iyo kuxigeenkiisa Maxamed Xaashi, kuwaasi oo duulaan ku ah kursiga Celi/Marreexaan.
Ugaas Taakooy ayaa waxaa uu ugu baaqay Cumar Dhagey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada Qaranka inuusan aqbalin musuqmaasuqa ay wadaan labadaasi mas’uul ee wada marin habaabinta hab qeybsiga beelaha Marreexaan, gaar ahaan kursiga Celi.
“Marreexaan anigaa Ugaas u ah, waxaana ku jiraaa saxiixayaasha 135 odey, waana ka digayaa in beelaha aan Ugaaska u ahay la isku diro, oo qaabkii ay wax u qeybsadeej 16 sano ka hor maanta ay badelaan rag dantoodu tahay isku dirka walaalo aan waxba isugu jirin” ayuu yiri Ugaas Taakooy, oo intaasi ku daray:
” Cumar Dhagey waxaa uu inoogu yimid Cadaado, waxaana uu naga dhageystay dulmiga ay wadaan madaxda Galmudug, isaga oo aan shaqadiisa qabsan ayuuna isaga noqday Muqdisho, taasi oo muujijeysa inuu wax ka ogyahay musuqa Abdikariim iyo Maxamed Xaashi” ayuu yiri Ugaas Taakooy.
Dhinaca kale, waxaa uu Ugaas Taakooy sheegay in beesha Celi kursiga ay laheyd inuusan reer kale u saxiixeyn, haddase ay madaxda Galmudug wataan inay si boob ah isaga sameystaan doorasho aysan ergo Celi iyo musharixiintooda ku jirin.
“Doorasho kasta oo ay sameystaan Abdikariim iyo Maxamed Xaashi marna noqon meyso sharci, maxaa yeelay kursigaasi Celi mooyee cid kale kuma fariisan karto. Waana u tegi doonaa ka hortaga dulmigaasi meelkasta” ayuu yiri Ugaas Taakooy.
Guddiga xallinta khilaafaadka oo loo gudbiyey kursiga Celi ayaa waxay xukun kusoo saareen in beesha Celi leedahay kursigaasi. Laakiin waxaa go’aankaasi in la fuliyo ka hor istaagtay Cumar Dhagey iyo madaxa guddiga doorashada heer gobol Xuseen Farmashiye.
Celi ayaa ka mid ah beelaha ugu waa weyn ee Marreexaan ee kala deggam Galmudug iyo Jubbaland, waxaasi xildhibaankooda ka mid noqday 36 kursi ee Galmudug la keenay.
DEG DEG: C/llaahi Goodax Barre, Mina Xasan Shibis, Maxamed Cumar Ceemooy iyo Xildhibaan kale oo Maanta Jowhar lagu doortay
Dhageyso: Guddoomiyaha Dagmada Jalalaqsi oo ka bad baaday Isku day Lagu qaarijin lahaa Kadib Markii Dabley hubeysan ay…..
DAAWO-SAWIRRO:- Hoolka Loo Diyaariyay Shirka Maamul goboleedyadda ee Baydhabo.
Nin Soomaali ahaa oo la baadi goobayay oo Police-ka Canada